Yini i-I Direct Directed IRA nokuthi Ungayisetha kanjani Up
I-I-I-Direct-Directed IRA i-akhawunti yokuthatha umhlalaphansi ekukunikeza uhla olubanzi lwezinketho zokutshalwa kwezimali kunokuvunyelwa umgcini we-IRA ojwayelekile. Abagcini abaningi be-IRA bangamabhange noma ama-stock broker. Vumela kuphela izimoto ezitshalayo ezizinikeza inzuzo yezezimali. I-IRA eziziqondisayo, ngakolunye uhlangothi, inomgcini okuvumela ukuthi utshale i-IRA yakho kusethi ebanzi yezinketho evunyelwe ngaphansi kwekhodi ye-IRS.
Abagcini abaningi be-IRA bavumela kuphela ukutshala imali kumasheya, amabhondi, izimali ezihlangene kanye nama-CD. Umuntu oziqondise yena uqobo we-IRA uvumela lezo zinhlobo zotshalo mali ngaphezu kwezakhiwo, amanothi, ukufakwa kwangasese, izitifiketi zokukhokha intela nokunye okuningi. iqondiswe i-IRA.
Kunenzuzo ethile yokuba nalesi sakhiwo sibe ne-LLC eyodwa noma ngaphezulu, njengokuvikelwa kwempahla kanye nokuguquguquka kokutshalwa kwezimali. Leli lungiselelo ikakhulukazi labo abafuna ngokweqiniso ukuphatha iphothifoliyo yabo yokutshala imali. Abatshalizimali abanjalo bangakhuphula izinga labo lokubuyisa, banciphise imali, futhi babanike amandla okwenza izinqumo ezisheshayo zokutshala imali.
Lokhu akuyona into entsha. Abatshalizimali babe namandla okuqondisa imali yabo yokutshalwa kwezimali ekukhetheni izinkundla zabo futhi bavune inzuzo yamahhala yentela kusukela i-1974. Eminyakeni eyedlule ye-10 noma ngaphezulu, ithuluzi lokuzibekela imali eliziholile lithole okukhulu ekuguquguqukeni, lelo lokuba ngumnikazi nokuphatha Inkampani Esibekelele Izikweletu.
Izinzuzo ze-LLC: · Unika amandla · Ukuvikelwa komthetho · Inzuzo engenayo intela
* I-IRA ingumnikazi we-100% ye-LLC
** Njengoba nje i-IRA ingatshala imali esitokisini se-Apple ekushintshaneni amasheya we-IRA angumnikazi wesitoko se-Apple, i-IRA ingakwazi nokutshala imali enkampanini eyenzelwe ngasese ukushintshanisa ubulungu ku-LLC.
*** Ngokuzenzakalelayo, umnikazi we-LLC unesibopho sentela. Njengoba umnikazi we-LLC eyi-IRA, inzuzo ikhulisa intela.
Vula i-IRA entsha eqondiswa nguwe bese i-IRA Limited Liability Company yakho ihlelwe kahle
Faka zonke imali ezikhona kwi-akhawunti yakho yomhlalaphansi
Yenza i-LLC entsha i-IRa entsha eyakho (enesivumelwano sokusebenza esenziwe ngokuqondile esibekiwe)
Hambisa zonke izimali ze-IRA kwi-akhawunti yakho yasebhange ye-LLC ngokusebenzisa umgcini we-IRA
Isitifiketi senzalo sobulungu ye-Issue LLC ku-IRA yakho
Ngefomethi engenhla ukhululekile ukutshala izimali zakho zomhlalaphansi. Kulula njengokusayina isheke. Lokhu kuvula iminyango eminingi emathubeni okutshala imali, njengezindlu, igolide nezinkampani eziphethwe ngasese. Konke okudingwa yi-IRS / DOL ukuthi i-LLC yakho ihambisane nayo yonke imithetho yayo. Futhi, udinga ukwenza izimali ezivunyelwe. Isibonelo, awukwazi ukuthenga ngokomthetho ikhaya leholide nge-IRA LLC yakho nangeholide kuyo. Akunakho ukuzenzela. Isibonelo, awukwazi ukuthenga ngokomthetho ikhaya noma enye impahla kuwe osuvele unayo. Yize kukhona okuhlukile, le mithetho yenzelwe ukutshalwa kwezimali okusemthethweni. Bona imihlahlandlela ye-IRS.
Sebenzisa inombolo ekuleli khasi noma ifomu lokubuza ukwengeza izidingo zakho nomeluleki.
Yini engenziwa i-IRA LLC?
Yenza izinqumo ezisheshayo zokutshalwa kwezimali: Ukuthenga izakhiwo ezingabikezelwa kusibonelo esivelele sesibonelo sokutshala imali ngejubane. Ungathatha isenzo sezezimali ngaphandle kokuvikela umgcini wenqubo noma ukushaja imali enkulu.
Ngempela, ukwehlukanisa imali ngokusemthethweni: Ungaqala ukusebenzisa imali yakho yokuthatha umhlalaphansi ngobuningi bamathuba wemali engenayo intela. Isibonelo, i-LLC yakho ingenza imalimboleko yesikhashana noma yesikhathi eside kwimpahla ethengiswayo, ezimotweni noma emabhizinisini, futhi ikhokhise amanani aphezulu kunangezikhungo ezibolekwa ngokwesiko.
Gcina imali bese ulawula eduze: Ungathenga impahla yokuqasha, bese ubheka abaqashi bakho bese uyiphatha ngokwakho, ugwema izindleko zokuphathwa kwempahla.
Ukhululekile ukubhala isheke kusuka ku-akhawunti yakho yasebhange ye-LLC ekutshalweni kwemali oyikhethayo ngaphandle kwemvume yomgcini, ukubuyekeza imali noma izindleko zokuthengiselana okuholele ekutheni kube yithuluzi lokutshala imali eliguquguquka kalula kunamathuba amaningi, ukulawula, ukuphepha, futhi kaningi - amandla amakhulu okukhula .
Vikela i-IRA kuDivosi
Abantu abaningi bakhathazekile ngokuvikela ama-IRA abo esehlukanisweni. Lapho sisetha uhlelo lokuvikela impahla lomuntu ocabanga ukuhlukanisa, yilokhu esikwenzayo. Kuqala sakha i-IRA eqondiswa nguwe. Ngemuva kwalokho iklayenti lihambisa izimpahla kusuka kuhlelo lwamanje ziye kumgcini oziqondisayo we-IRA. Sakha i-Wyoming LLC engumnikazi we-IRA. Iklayenti licela umphathi oziqondisayo we-IRA ukuthi atshale imali etholwa yi-IRA ku-Wyoming LLC. I-IRS ivumela umuntu ukuthi atshale imali enkampanini eyimfihlo. Abaphathi abaningi abavumeli ukuthengiselana okunjalo ngoba abakwazi ukukukhokhisa amakhomishini ama-stock brokerage ngokwenza lokho.
Okulandelayo, sakha i-trust yaselwandle enezingxenye ezimbili. Ingxenye A ingezimpahla ezingathathi umhlalaphansi. Ingxenye B ingezimpahla zomhlalaphansi. Ingxenye ye-A ingumnikazi we-offshore LLC. Ingxenye B inenye i-offshore LLC. Iklayenti, njengowasayine ku-Wyoming LLC, lifaka imali kwi-offshore LLC esengxenyeni yomhlalaphansi yesikhwama. I-IRA ingumzuzi wengxenye yomhlalaphansi yesikhwama. Lapho ukuhlaselwa okungokomthetho kugadla, inkampani yethu yasogwini lolwandle ingena ekuvikeleni izimpahla. Izinkantolo zasendaweni zamakhasimende azinamandla okuphatha kunkampani yabameli basolwandle. Ngakho-ke, izimpahla zihlala ziphephile futhi zivikelekile. Izimpahla zihlala ngaphansi kwesambulela somhlalaphansi, ngakho-ke izinzuzo zentela zihlala.
Nansi umdwebo wombhalo we inqubo yokuvikela i-IRA esehlukanisweni. Izimali zisuka kumgcini wamanje we-IRA .—-> Kumgcini oziqondisayo. —–> Ubuza umphathi oziqondisayo we-IRA ukuthi atshale izimali kwi-Wyoming LLC ephethwe ngasese ezoba yi-IRA yakho (umgcini oziQondayo akazukufaka ucingo olwandle). —–> Wena, njengowasayina ku-Wyoming LLC ufaka imali kwi-akhawunti ye-offshore ephethwe yi-Nevis LLC. I-Nevis LLC ukuthi ingxenye yomhlalaphansi ye-trust yakho ethembekile. —-> Nawe ungatshala izimali njengoba ufisa ngaphakathi kwe-akhawunti yasebhange yeNevis LLC.
I-mechanics yalokhu empeleni ilula. Wena uqondisa i-IRA yakho yamanje ukuthi uyitshale imali kwi-LLC eyenzelwe ngasese. I-IRA yakho inephesenti eliyikhulu lenzalo yenkampani oyiphethe efakela imali yakho yomhlalaphansi. Kunemikhawulo embalwa futhi cishe konke ukuthengiselana okwenqatshelwe kubandakanya ukufaka imali imali neqembu elihlobene; iphathi ehlobene nokuba nguwe nomndeni wakho oseduze. Bheka Imithetho ye-IRS ngezincazelo eziqondile. Cishe konke ukutshala imali yezingalo kuzoba semthethweni futhi kunenombolo yokukhishwa okungokomthetho okungenziwa. Khuluma nomeluleki onelayisense noma wokutshala imali mayelana nesimo sakho ngemininingwane ethe xaxa. Ngaphezu kwalokho, umnakekeli wakho we-IRA oqondiswa nguwe angakusiza ukukuqondisa.
Ukusetha i-IRA LLC kungukuthengiselana okuningana okuningi; okokuqala udinga i-IRA eqondiswa nguwe uqobo. Ngemuva kwalokho uqondisa umgcini wakho we-IRA ukutshala imali kwi-LLC esanda kwakhiwa. Uvula i-akhawunti yasebhange ye-LLC. Ekugcineni uxhasa i-IRA LLC. Uma usuqedile konke lokhu ungaqala ukutshala imali ngokuzihola nge-akhawunti yakho yomhlalaphansi.
Kubalulekile ukuthi uphathe zonke lezi zinto ngendlela efanele. Lokho wukuthi, udinga ukuqinisekisa ukuthi zonke izivumelwano nemibhalo yokwakheka zenzelwe i-IRA. Ngokwengeziwe, i-IRA idinga ukukhokhela yonke inqubo. Uma umnikazi we-IRA ekhokhela mathupha lokhu, yonke i-akhawunti ingaba isenzo esinqatshelwe. Imingcele ye-IRS kulokhu icacile nemiphumela emibi ngokuwela ohlangothini olungalungile lwemigqa yokuthengiselana enqatshelwe. Kubaluleke kakhulu ukuthi uchwepheshe onolwazi ahole inqubo yakho nommeli noma umhlahlandlela womeluleki ofanelekile.
Ukwakheka kwe-IRA LLC Kubandakanya okulandelayo:
I-LLC Igama Ukuhlola nokubhuka ngaphakathi kwesifunda sakho sokukhetha
Ukulungiselela nokudwetshwa kwezindatshana zakho zokufakwa ngaphakathi
Imibhalo Egcwaliswe Ngombuso owukhethayo
Iphakethe Lamadokhumenti Lithunyelwe Nge-imeyili Ebaluleke Kakhulu
Uhlu Lokuhlola Okubalulekile Lenkampani
I-Corporate Kit ephelele
Ukugcwaliswa Kwamadokhumenti Ezwakala
Ifomu lokhetho le-S-Corporation
Inombolo ye-ID Yentela
Ukuhlukaniswa Kwebhizinisi (Intela)
I-IRA LLC Business Checking Account
Usizo ngokusetha i-akhawunti entsha yokuhlola ibhizinisi kwe-LLC esanda kwakhiwa
Ukuxhaswa ngemali kwe-IRA LLC Kubandakanya Izinyathelo Ezilandelayo:
Kuvulwa i-akhawunti entsha yasebhange ye-IRA LLC
Khipha intshisakalo yobulungu ku-IRA yakho eqondiswe nguwe
Ukuvunywa kwesivumelwano sokusebenza
Ukunikezwa kwemenenja ye-LLC
Ukuvunywa kwayo yonke imibhalo nezinkontileka
Kudluliswa imali ye-IRA
QAPHELA: Lezi zinqubo zokubumba akufanele zenziwe ngaphandle kosizo lochwepheshe.
Shayela inombolo kule khasi noma usebenzise ifomu lokubuza ukuze uthole usizo.
I-Self Directed IRA LLC yilapho i-IRA eqondisa khona ithenga, noma ifaka imali kuyo, inkampani entsha futhi kulokhu inkampani enomthwalo olinganiselwe. I-Self Directed IRA ingumnikazi wayo yonke inkampani enesikweletu esilinganiselwe, futhi wena umnikazi we-IRA, uphatha i-LLC entsha. Isihlalo semenenja ye-LLC sihlinzeka ngokulawulwa kwamabhuku okuhlola futhi sivule lonke uhla lwamathuba wokutshala izimali ezikhwameni zakho zomhlalaphansi. Wenza i-akhawunti yakho ye-IRA ibe yilungu (umnikazi) we-LLC futhi uzokwabela umphathi wenkampani ongathola isinxephezelo ngezinsizakalo. Umphathi we-LLC uzobe eqhuba imisebenzi yenkampani yansuku zonke njengokwenza izinkontileka, imali yezintambo nokusayina amasheke njengoba kuyalelwe. Kubaluleke kakhulu ukuthi ufune usizo lochwepheshe onolwazi lokuthi ungayisetha kanjani i-LLC yakho kanye necebo lokuphatha le-IRA yakho.
Kukhona imithethonqubo, okusemthethweni kanye nemithetho okudingeka ilandelwe, ikakhulukazi ekuqaleni lapho usungula ngokwakho i-IRA LLC uqobo. Okokuqala nokubaluleke kakhulu, i-IRA yakho eqondiswa nguwe uqobo izokuthenga amasheya we-LLC, okusho ukuthi i-IRA yakho kumele isivele isungulwe, bese uqondisa imali yakho yokuthatha umhlalaphansi kule LLC entsha.
Abantu abaningi abakhethi ukusungula eyabo i-IRA LLC uqobo, baphendukela kumhlinzeki oqeqeshiwe wezinsizakusebenza zedokhumenti yomthetho ukuze balungiselele futhi bakhiphe amafayela abo
Ukusungula i-Self Directed IRA LLC kudinga ukwenziwa ngokwenqubo ukugwema izingqinamba ezizayo. Kubalulekile ukuthi ukwakheka kwe-akhawunti yakho yokwakhiwa kwenkampani kanye nomhlalaphansi kwenziwe ngendlela futhi kuhambisane nezichibiyelo ezifanele zenkontileka yokusebenza yangaphakathi. Ukuthengiselana kungavinjelwa uma kwenzeka ukuthi i-IRA noma i-LLC ingasungulwa futhi ihlelwe kahle. Okwenziwayo okungavunyelwe kuyinkambiso ye-Achilles yokuvuna imali ephansi nenzuzo yokutshala imali ngaphandle kwentela. Uma i-IRA LLC yakho ihlale ingaphansi kwesibonakhulu, kuhle ngaso sonke isikhathi ukuthi inhlangano nokwakheka kwakho kube okulungile. Intengo yesevisi ye-IRA LLC iqokiwe ukugwema izinkinga zalolu hlobo.
Okwenziwayo kukhawulelwe kuphela kulabo abazuza uhlelo lokuthatha umhlalaphansi futhi abekho phakathi kwezinhlangano ezingafanele. Lokhu kuchazwa ngokukhululekile ngezansi, ngemininingwane, bona imibhalo ye-IRS kumaqembu angavumelekile;
Umnikazi we-IRA noma umlingani womnikazi
Umndeni womnikazi we-IRA, izingane, abazali, njll
Ibhizinisi elingaphezulu kwe-50% elingelomuntu onelungelo lokungafanele
Umnikazi we-10%, isikhulu, umqondisi noma umsebenzi ibhizinisi elingelomuntu ongahlunyelwe
Noma ngubani ohlinzeka ngezinsizakalo ku-IRA
Ngezansi kunohlu lokuthengiselana okungavunyelwe nezinye izinto ongeke uzenze nge-IRA LLC eqondiswe ngokwakho:
Tshala imali yakho yomhlalaphansi ungene ekhaya ohlala kulo manje
Hlanganisa imalimboleko usebenzisa impahla yokuthatha umhlalaphansi
Ukuthengisa impahla yomuntu siqu ku-IRA
Ukubolekwa imali kubantu abangafaneleki
Ukukhokha imali yakho
Ukuthenga umshuwalense wokuphila
Akunasidingo sokwenza ukuthengiselana okungavunyelwe ngethuba elingenamkhawulo lokutshala imali elinikezwa yi-IRA LLCs uqobo. Ngokulawulwa kwencwadi yamasheke ezikhwameni zakho zomhlalaphansi, i-IRA LLC eqondiswa nguwe uqobo iyimoto ephakeme kakhulu yesikhwama somhlalaphansi yanoma ngubani ofuna okwehlukile.
Izakhiwo zithengiswa kakhulu ngokutshala imali yesikhwama somhlalaphansi kanye ne-IRA LLC. Uyakwazi ukwenza izinqumo ezisheshayo njengezenzo ekuthengisweni okufushane futhi angakwazi ukuqongelela inzuzo ukuze kusizakale mahhala esikhwameni somhlalaphansi.
Lapha ungahamba ngesibonelo sendlela i-IRA LLC engasetshenziswa ngayo ngezinga eliphakeme lokukhula kwezimali zomhlalaphansi. Ungayisebenzisa kanjani i-IRA LLC.
Unama- $ 150,000 ku-akhawunti ye-IRA futhi uthatha isinqumo sokuthi ufuna ukutshala lezo zimali kwizakhiwo ezithengiswayo ozithola ngokuthengiswa kwembonakalo yangaphambili. Ngakho-ke, udala i-LLC enesivumelwano sokusebenza esifaka kuhlu lelungu kuphela njenge-akhawunti yakho ye-IRA. Okulandelayo, uzosetha i-akhawunti yasebhange ye-LLC futhi ufundise umgcini wakho we-IRA ukuthi afake i-$ 150,000 ku-akhawunti yasebhange ye-LLC.
Nge-IRA LLC yakho ehlelwe kahle, eyakhelwe futhi exhaswe ngemali, ungagxuma ungene ngaphakathi bese uthwebula leyo ntengiso engaziwa. Usebenzisa i- $ 120,000 futhi uthole amakhaya amane, wonke lawo azothengwa futhi abizwe nge-LLC okunge-IRA yakho. Uqasha impahla ngayinye iminyaka embalwa futhi zonke izindleko, izintela, umshuwalense kanye nokugcinwa kuyakhokhwa yinkampani esebenzisa i-akhawunti yasebhange le-LLC. Imali engenayo evela erenti iya ngqo kwa-LLC. Njengoba i-LLC ingeyama-IRA, inzuzo ayikhokhelwa intela. Njengoba inzuzo engenayo intela ingena, i-LLC engaphakathi kwe-IRA yakho ingathenga indawo ethengiswayo ethe xaxa, igolide, isitoko noma enye impahla ukukhulisa ukuphambanisa kuphothifoliyo yomhlalaphansi.
Uma ngamunye wamanethiwekhi wempahla yakho aqashiswayo engu- $ 500 ekuhambeni kwemali kungasho ukuthi i-16% izonyuka ngokuphuma kwemali nje. Uma usulungele ukuthengisa amakhaya, uzokhipha imali ebambile futhi i-IRA yakho ingathola ukheshi olungeyona intela. Uthengisa izindlu zakho ngama- $ 200,000 adluliselwa ngqo ku-akhawunti yasebhange ye-LLC. I- $ 150,000 yakho yokuqala ikhule yaba ngu- $ 272,000.
Imithetho Jikelele yeThumb yabanikazi be-IRA LLC
Ungakugwema kanjani okwenziwayo okwenqatshelwe. Abanini be-IRA LLC, umndeni, umlingani noma isizukulwane esisezingeni eliphezulu akufanele:
Thola impahla noma ukusatshalaliswa kwa-IRA LLC.
Zuza noma usebenzise noma iyiphi impahla ye-IRA.
Khokhelwa imali kwa-IRA.
Bamba iqhaza kunoma yikuphi ukuthengiselana.
Nikeza ngezinsizakalo, ezinxepiwe noma cha, ku-IRA LLC.
Uma kubhekwa noma yikuphi ukutshalwa kwezimali okungekho engalweni, kufanele ubonisane nomeluleki wokuthengiselana ofanelekayo. Kunezindlela eziningi ukuthengiselana okungavinjelwa, iningi lifaka ukuhlanganisa umsebenzi nezindleko nempahla ye-IRA LLC. Uma ungaqiniseki, buza i-CPA noma omunye uchwepheshe ofanelekayo. Bamba kuphela imisebenzi oqinisekile ukuthi igunyaziwe.
Kunokuningi kubanikazi be-IRA okufanele baqonde lapho besungula i-LLC. Kuyinjongo ekhethekile yokutshala imali edinga ukwakhiwa ngokucophelela. Isivumelwano sakho sokusebenza, isimo sentela, ubunikazi besakhiwo, ukusebenza okusemthethweni konke kudinga amalungiselelo akhethekile e-IRA. Inhlangano ethembekile kufanele ikwenzele lokhu.
Ama-IRA ama-Real Estate avumela abanikazi be-akhawunti yomhlalaphansi ukuthi bathenge izindlu nezezimali ze-IRA, mahhala. Ungathenga impahla ethengiswayo ngokushesha njengokubhala isheke futhi utshalomali lwakho alukho ngaphansi kwemvume yokugada noma imali yokuthenga. Ungenza izinkokhelo eziphansi futhi uthole imali mboleko engabizi yokuvuselela ukuze ukhulise imali oyitshalile. Ukwenza i-LLC yohlelo lwe-IRA yezezakhiwo kungakusindisa futhi kukutholele izinkulungwane zamaRandi uma uqhathanisa nomqaphi we-IRA ozimele. Lokhu kungenxa yokuthi ungatshala imali ezinkampanini ezingathengiswa esidlangalaleni, ngaphandle kwekhomishini, njengezinkampani zesikweletu esinqunyelwe. Futhi ungasebenzisa ama-LLC owasebenzisayo ukuthenga izindlu kanye nolunye utshalomali.
I-IRA LLC eyenzelwe wena uqobo isibe imoto yokutshala imali yokuzikhethela ukuthenga izakhiwo njengengxenye ye-akhawunti yomhlalaphansi. Ukumane nje uzenzele i-IRA LLC ekuvumela ukuba unqume ukuthi uyitshale kuphi imali yakho. Ungalawula incwadi yokuhlola ye-LLC. Utshalomali olutholakala kuwe ngamapulani omhlaba, izakhiwo zamafulethi, amaphrojekthi wekhondomu, amakhaya emindeni, nje ukusho okumbalwa. Ungathenga namanothi, ama-tax liens, ama-tax tax, i-estate yangaphandle noma efuywayo usebenzisa i-IRA LLC yakho.
Nge-LLC ye-IRA yakho eqondisiwe, unga:
Thenga ngokushesha - thenga imali ekubonisweni kwezezakhiwo, kwizikweletu zentela noma ubolekise imali yakho.
Yiba ngumphathi wakho wepropathi (usebenzela i-LLC), bese ugcine izindleko futhi ulawule ngokuphelele ukutshalwa kwemali (qiniseka ukuthola izeluleko zentela ezinelayisense).
Thenga ikhaya lomhlalaphansi ngenani lemakethe lanamuhla - uliqashe uze uthathe umhlalaphansi, bese ulithatha njengokwabiwa komhlalaphansi
Ochwepheshe batusa kakhulu i-LLC ngenxa yokuguquguquka kwayo kanye nezinto zokuvikela amafa. Kodwa-ke, uma ufuna ukutshala imali yakho yokuthatha umhlalaphansi endaweni eyodwa isikhathi eside kakhulu, izindleko ezengeziwe nokusebenza okusemthethweni kwe-IRA LLC akudingekile.
Sebenzisa abeluleki bochwepheshe abaqeqeshiwe ukukuqondisa enkambisweni - njalo qiniseka ukuthi ukuthengiselana akuvunyelwe. Setha i-LLC ngochwepheshe onolwazi. Ngemuva kwalokho, gcina iseluleko sommeli onelayisense kanye ne-accountant. Ummeli angakunikeza idokhumende echaza ukuthi okwenziwayo kusemthethweni noma akuvumelekile, i-accountant ingakusiza uqinisekise ukuthi uyayithobela imithetho yentela.
Izici ezinamandla ze-IRA Real Estate:
Abasekeli abambalwa be-IRA kuphela abazovumela ukutshalwa kwezimali okuqondile kwi-IRA yakho. Ngakho-ke, i-IRA yakho Yezindlu ikuvumela ukuba uthathe izinqumo futhi uthathe isinyathelo ngokushesha, ngakho-ke ikunikeza ukuziqondisa kwangempela.
Izinzuzo zezimali ezivela ekuthengisweni kwezezakhiwo nakwinzuzo zibuyiselwa intela ku-IRA yakho yendabuko noma mahhala-ku-Roth IRA yakho njengokutshalwa kwemali.
Ungaba nokuqondisa kokulawulwa kwempahla yakho yangempela.
I-Real Estate IRA ingasebenzisa imali ye-IRA ukwenza izinkokhelo eziphansi kanye nokuthengiswa kwezakhiwo ngejubane lokuhlola.
Izimali ezincane eziqondiswa i-IRA zokugcina kusukela ulawula ukuthengiselana.
Ngoba izakhiwo zingezakwa-LLC, amafa avikelwe emacaleni futhi ahlukaniswa nezinye izimali ze-IRA nasekubambeleleni kwakho.
Kugcine ukubuyekezwa ngo-Okthoba 20, 2020
Ukuvikelwa kwempahla kusuka ku-Lawsuits I-Offshore Company Formation Ukufakwa kweNkampani yase-US I-Offshore Banking Ukusekelwa Kwethemba Ukuhlelwa kwezindlu Izincwajana zemininingwane